China Rubber Hex Dumbbells vagadziri uye vanotengesa | Meiao
Simba kudzidzisa inzira yakanaka yekudzora mafuta emuviri, nepo ichiwedzera kuwonda kwemhasuru uye kupisa macalorie.
Kuwedzera yedu Rubber Hex Dumbbells kune yako yemidziyo michina ichave yakanaka kune toning nekusimbisa ese ari maviri epamusoro uye ezasi muviri.
Ine rabha yakaputirwa dhizaini, aya madumburu ndiyo sarudzo yakavimbika kune chero munhu, anotanga kana akasimudza akasimudza, anofarira kugwinya kwavo.
Iyo yerabha hex dhizaini inounza pahunhu, mashandiro uye hupenyu hurefu.
Inoshanda Hexagonal Dhizaini
Nekuda kwechimiro chavo chakaita mativi, iwo maRubber Hex Dumbbells haatenderedze paanoiswa pasi.
Yakanakira dzimba dzekudzidzira muchinjikwa epamhepo apo michina yakawanda iri kushandiswa kana painoshandiswa pane isina kuenzana nzvimbo.
Kuomarara Rubber Kuputira
Basa rinorema, rabha yakavharwa misoro inogumira kupfeka uye kubvarura kune iwo mabhero ekuita kuti ave akasimba kwazvo.
Iyo yekumira yerabha inoita iyo dumbbells yakanyarara kana yaiswa pasi ichibatsira kudzikisira ruzha uye kuchengetedza yako Workout pamusoro.
Iyo chrome yakafukidzwa mubato iri ergonomically yakagadzirirwa kuti unzwe wakasununguka mune chero chinobata chimiro.
Iyo knurling pane iyi premium dumbbell yakagadzirirwa kudzivirira kutsvedza uye kukubatsira iwe kuti ubate yakasimba kuitira kuti iwe ugone kuwana zvakanyanya kubva kune yako Workout zvakachengeteka.
Dumbbells akakosha ekurovedza muviri michina, kana iwe uchida kurovedza muviri munyaradzo yeimba yako. Idiki, inogona kuchengetwa zviri nyore muwadhiropu, pasi pemubhedha, inokodzera chero munhu anoda zvekurovedza muviri pamwe nyore.
Wako Kudzidziswa Partner
Funga kushandisa mabhenji ebhenji ine curl yekubatanidza kuti uwedzere yako dumbbell Workout.
4.Warranty nechigadzirwa chimwe nechimwe chakatengeswa.
5.Kutsvaga uye kugadzira zvigadzirwa zvitsva nguva dzese.
6. Kurudziro yehunyanzvi
Pashure: Kanda Iron Iron 2-Inch Kurema Plate
Zvadaro: Yakazara rabha mahwendefa
Gym Simba Kudzidziswa Hondo Tambo kudzidzisa nhema B ...
Chrome uremu yekusimudza gym inoshanduka dumbbell yakaiswa
Kunogara Fixed kumativi matema rabha dumbbell pamwe ...
10kg Wholesale kukandira simbi Bumper Steel Barbell ...
Nyowani yekuuya chigadzirwa seti yeanogadziriswa dumbbells ...
High Quality Home Use simbi Frame squat pani kuti ...